Af qalaad Aqoonta miyaa? (Maqaal) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Sida Afafka oo kale wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaana xil loo magacaabay seddex jeer, iyada oo dood fogaatay darteed iyo taageero qalafsan oo xubno Dawladda ka tirsan, ganacsato iyo xunbaha guddiga qaarkood ay gacan maroojin ku samaynayeen xubnaha guddiga. Taageero dad aan danta guud ka fakarayn, dad qabiilka ku fogaa iyo ganacsato wax kale laga dhaadhiciyay iyo guud ahaan dowladihii oo fadhiid ahaa iyo go'aan la'aan wasaaradihii ku shaqo lahaa arrinta qorista Af Soomaaliga ayaa mixnad ku noqday guddiga inuu fuliyo howlihiisa. Sidoo kale wadamo shisheeye sida kuwo Carbeed ayaa taageero iyo mucaarad isku garab waday.
Labo jeer ayaa waxaa uu guddiga soo saaray ama daabacay xogtii uu helay. Labadii jeerba xogta waa la duugay oo hab musuqmaasuq unbaa lagu sifeyn karaa. Baaristii labaad yo xog-baarkii labaad hey'ada Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa maalgelisay baarista iyo fadhiga guddiga.
Markii seddexaad waxaa waxaa dib loo abaabulay sanadkii 1972-kii, iyaga oo qaamuus, buugag iyo manhajyo ku diyaariyay mudo 1 sano gudihiis ah. Guddiga waxay go'aansadeen in Far Soomaaliga lagu qoro xuruufta Laatiinka, iyada oo dhaqaalaha wadanka loo eeyay iyo qalabka markaas la heli karay oo u badnaa midka farta laatiinka ama ABC ku naqshadaysnaa. Qorist Far Soomaaliga ayaa go'aan laga gaaray 1972-kii, iyada oo guddiga isla markiiba ku dhaqaaqay ururin qaamuus iyo howlo kale oo baaxad leh.
Waxaa jiray codbixin ballaaran oo la siinayay in xuruufta Af Carabiga la doorto balse dhaqaalaha inuusan saamaxeyn, isla markaana Af-Carabi ay bulshada Soomaaliyeed ku baran karaa si sahal maadaama cannuga walba oo Soomaaliyeed uu Qur'aanka ku barbaaro oo aysan mushkilad ku noqoneyn in Af Carabi, afka Quraanka la baran waayo.
Guddiga Af Soomaaliga waxay qoreen buugtii ugu horreysay ee Af Soomaali rasmi ah lagu qoro walow Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal iyo Shire Jaamac Axmed ay tijaabiyeen Far Soomaali hore. Fartii Shire Jaamac Axmed ayaa hirgashay kalfadhigii ugu dambeeyay ee uu guddiga ku go'aansaday in la qaato xuruufta Shire Jaamac Axmed uu alifay.
Wasiir Beyle oo la kulmay Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya+Sawirro